PSSH, mhanyisa kuraira pane akawanda ari kure maseva panguva imwe chete | Linux Vakapindwa muropa
PSSH, mhanyisa kuraira pane akawanda ari kure maseva panguva imwe chete
OpenSSH Icho chimwe chezvishandiso chinonyanya kushandiswa nevashandisi vehurongwa uye zvine musoro kuti izvi ndizvo zvazviri nekuti zvinotibvumidza kudyidzana nekomputa iri kure asi sekunge takagara ipapo ipapo uye isu tatova nazvo, X11 Kutumira, kugona kuona chero GUI. Asi pane muganho unonzwisisika, uye izvo ndezvekuti isu tinofanirwa kuvhura chinongedzo checomputer yega yega iri kure iyo yatinowana, iyo yatinoda seakawanda windows windows.
Asi yemahara software inogara iine zvinoshamisa kwatiri, uye kune chishandiso senge PSSH zvinotitendera mhanyisa kuraira kuburikidza neSSH pane akawanda maseva ari kure kubva kune imwechete shell, nekudaro kuchengetedza zviwanikwa uye kuwana yakawanda mukushushikana kana uchiibata. Icho chirongwa chinonakidza kwazvo, chakagadzirwa muPython uye chinopa mashandiro ane hungwaru uye akapusa kune avo vedu vakamboshandisa SSH nguva dzose.
Ndicho icho PSSH inoumbwa nezvakasiyana zvinoshandiswa, iyo inotipa basa rakazara kana zvasvika pakutarisira maseva ari kure sezvo tiine chirongwa senge pscp yekuteedzera mafaera kune akati wandei mauto mune yakafanana, prsync yekufananidza mafaira kune akati wandei mauto panguva imwe chete, pnuke yekupedzisa kana 'kuuraya' maitiro pane akawanda mauto uye pslurp kuteedzera mafaera kubva kumahombekombe mazhinji ari kure kuenda kumuchina mumwe. Sekuona kwedu, mikana iyo tese yavanotipa inoyevedza sezvo tichigona ita backup imwechete panguva kumakomputa maviri, pakati pezvimwe zvinhu.
PSSH inogona kuiswa kana tikadzora nekuisa Pip mune yedu distro; Kune avo vasingazive chishandiso ichi, tinogona kutaura kuti iwo murairo kuti inobatsira kuisirwa uye manejimendi yePython-based software. Kana tangoisa iyo (iri mumahofisi epamutemo eiyo main distros, inonzi python-pombi) isu tinoita chimwe chinhu chiri nyore se:
# pombi yekuisa pssh
Ichi chishandiso chichaita chinhu chayo uye tichava nacho PSSH yakaiswa, ipapo ichave nguva yekumisikidza iyo yefaira faira, iyo isipo uye isu tichafanirwa kuigadzira kuti tiwedzere iyo IP kero yevagadziri kwatiri kuenda. Tinogona kudzidza zvakawanda nekumhanya 'pssh -help' asi tinogona kutaura zvakachengeteka Yakafanana SSH kana PSSH Icho chishandiso chakazara kwazvo uye chakasiyana, chine mashandiro acho chingave izvo zvaive zvakamirirwa neSysAdmins zhinji
Mamwe Mashoko: PSSH (muGoogle Kodhi)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » PSSH, mhanyisa kuraira pane akawanda ari kure maseva panguva imwe chete
AndEX OS: LiveCD yekushandisa Android pane yako PC